खान लाउन नपुग्ने गरिब किसानको घरमा कसरी आयो १ अर्ब २८ करोड बिजुलीको बिल ! « Janaboli
खान लाउन नपुग्ने गरिब किसानको घरमा कसरी आयो १ अर्ब २८ करोड बिजुलीको बिल !
काठमाडौं । गाँस, बाँस र कपासका लागि संघर्ष गर्ने सामान्य नागरिकको घरमा बत्ती बाल्ने र पंखा चलाउने बाहेक अन्य काममा विद्युत प्रयोग नगर्ने उपभोक्ताको घरमा १ महिनाको बिजुलीको बिल कति आउला ? सामान्यतया निर्धारित न्यूनतम महसुल भन्दा धेरैको बिल आउने सम्भावना रहँदैन ।
तर, एक किसानको घरमा १ अर्ब २८ करोड ४५ लाख ९५ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँको बिजुलीको बिल आएपछि ती उपभोत्ताको होसहवास उड्यो । यो घटना भारत उत्तर प्रदेश राज्यको हापुड जिल्लाको हो । शमीम नामका ती उपभोक्ताको घरमा यती धेरै रकमको बिल आएपछि आत्तिए । उनले बिल तिर्न सक्ने कुरै भएन ।
यतिमात्र होइन उनले समयमा बिल तिर्न नसकेपछि उनको घरको लाइन नै काटिएको छ । बिल विद्युत विभागको गल्तीका कारण यति धेरै रकमको बनेको हो । शमीमका अनुसार कोही उनको कुरा सुन्न तयार छैनन् । जब उनी यसबारे गुनासो गर्न गए त्यतिबेला विभागका कर्मचारीले बिल नतिरेसम्म घरमा लाइन नजोडिने बताएर फर्काएको उनले बताए ।
शमीमकी पत्नी खैरुन निशाका अनुसार उनीहरु बत्ती बाल्न र पंखा चलाउन मात्र विद्युत प्रयोग गर्छन् । सहायक विद्युत अभियन्ता राम शरणले स्वीकार गरे कि केही प्राविधिक गल्तीका कारण यस्तो भएको हो । उनले यसलाई सुधार गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार यदि पीडित उपभोक्ताले उनीहरुलाई बिल उपलब्ध गराएमा सिस्टममा सुधारपछि सही बिल जारी गरिने बताएका छन् । तर आजसम्म ति वृद्धलाई दिएको सास्तीका बारेमा कसैले चर्चा गरिरहेको छैन । हामीले माथि बताएको रकम भारुमा हो ।